Etabọchị ahịa ụbọchị Valentine na eCommerce Asịwo Amụma maka 2021 » Martech Zone
Ọ bụrụ na azụmaahịa gị ma ọ bụ azụmaahịa gị na-alụ ọgụ site na ọrịa na mkpọchi mkpọchi, ị nwere ike chọọ ịrụ ọrụ oge karịa na gị Valentbọchị Valentine mkpọsa dịka ọ dị ka nke a ga - abụ afọ ndekọ maka mmefu - n'agbanyeghị nsogbu ịma aka akụ na ụba! Eleghi anya isoro otutu ndi anyi huru na ulo anwu bu igbanye oku nke ihunanya… ma obu choro ka anyi mezie ihe egwuregwu.
A National Retail Foundation nnyocha na-ebu amụma na-eji ọkụ atụmatụ na-emefu ná nkezi, $ 196.31, elu 21% karịa afọ gara agandekọ ndekọ gara aga nke $ 161.96. A na-atụ anya na mmefu ga-agụta $ 27.4, elu 32% site na ndekọ nke afọ gara aga $ 20.7.
Inebọchị Valentine Ecommerce Statistics
Dị ka Ntọala National Retail, Inepo ụbọchị abụkwaghị naanị otu ụbọchị iji gosipụta ekele i nwere maka di ma ọ bụ nwunye gị. Ndị ahịa na-azụ onyinye maka ndị ọzọ dị mkpa, ụmụaka ha, ndị nkuzi ha, ndị ọrụ ibe ha… na anụ ụlọ ha! 15% nke ndị America na-azụtara onwe ha onyinye ụbọchị inepo.
Mmefu Mmefu - ndị ahịa na-ekwu na ha ga-etinye ihe dịka $ 30.19 na ndị ezinụlọ ndị ọzọ karịa di na nwunye, dịtụ site na $ 29.87 n'afọ gara aga; $ 14.69 na ndị enyi, site na $ 9.78; $ 14.45 na ụmụ klas nke ụmụaka na ndị nkuzi, site na $ 8.63; $ 12.96 na ndị ọrụ ibe gị, site na $ 7.78; $ 12.21 na anụ ụlọ, site na $ 6.94, na $ 10.60 na ndị ọzọ, site na $ 5.72.
Valentbọchị Valentine maka anụ ụlọ - 27% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha ga-azụta onyinye inepo maka anụ ụlọ ha, ọnụ ọgụgụ kachasị elu na akụkọ ntolite nke nyocha ahụ wee site na 17 pasent na 2010 maka ngụkọta $ 1.7.
Emefu site Afọ - Afọ 18 - 24 - na-eme atụmatụ imefu nkezi $ 109.31. Afọ 25-34 na - enwe nnukwu ego na ụmụaka ịzụrụ ma tụọ anya iji $ 307.51. Afọ 35-44 bụ ndị kacha akwụ ụgwọ na $ 358.78.
Emefu site na Gender - Dị ka n’afọ ọ bụla nke nyocha ahụ, ụmụ nwoke na-eme atụmatụ imefu karịa ụmụ nwanyị na $ 291.15 ma e jiri ya tụnyere $ 106.22.
Top inebọchị Shobọchị Valentzụ ahịa
Abalị .bọchị - $ 4.3 ijeri ga-emefu na a pụrụ iche n'abalị si 34% nke Valentpo participantsbọchị sonyere.
swiiti - Ijeri $ 2.4 ga-eji 52% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ isonye na onyinye ụbọchị Valentine - yana atụmatụ 22% inye chocolate.
ọla - $ 5.8 ijeri ga-eji 21% nke ndị na-eme ememe na-eme atụmatụ isonye.
okooko osisi - Ijeri $ 2.3 ga-emefu site na 37% bụ ndị na-ezube isonye.
onyinye kaadị - A ga-eji $ 2 ijeri na kaadị onyinye afọ a.
Kaadị ekele - A ga-eji $ 1.3 ijeri na kaadị ekele Valentbọchị Valentine.
Akụkụ ndị dị na ala gụnyere ngwaọrụ, ndị otu mgbatị ahụ, akụrụngwa egwuregwu, ngwa kichin, ụmụ anụmanụ jupụtara na ya na mixtapes (ndị mmadụ ka na-eme ya?!).
Valentbọchị Valentine mkpọsa
Buru n'uche na ego ka siri ike maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'afọ a na ọtụtụ ndị sonyere na ụbọchị inye onyinye ga-eme oge ikpeazụ ... yabụ bido mkpọsa gị ma debe ha ka ha ruo ụbọchị ị ga-anapụta!
Anyị ekekọrịtala edemede na infographic ọzọ na ụfọdụ nnukwu inepo Day Social Media Kọntestị echiche!
Tags: swiitichocolateomume n'ji ahiaecommercekaadị onyinyeKaadị ekeleIhe ngosiọlan'anyaịhụnanya dị n'ikukuụlọ oriri na ọṅụṅụJerikoụbọchị Valentineụbọchị valentine infographicInebọchị Valentine n'ji emefuPo giftsbọchị onyinyeSpendingbọchị nkwalite ụbọchị ValentineShoppingbọchị ịzụ ahịa inepo
POE bu okwu achoro nye uzo ato nke esi ekesa ihe. Gwọ akwụ ụgwọ, nke a na-enweta na mgbasa ozi bụ atụmatụ niile bara uru ...